Andro: 9 mey 2020
Coronavirus dia voarohirohy ho olona an-tapitrisany maherin'ny 3 tapitrisa 981 eran'izao tontolo izao
Voalaza fa ny karazana coronavirus vaovao mipoitra ao amin'ny tanànan'i Wuhan ao amin'ny faritanin'i Hubey any Chine, dia alefa any amin'ny olona 3 tapitrisa 981 tapitrisa eran-tany. Araka ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena momba ny serasera, dia 3 tapitrisa 981 [More ...]
'Overpass with Escalator' mankany Doğupark
Samsun Metropolitan Munisipaly dia manatanteraka tetikasa manan-danja iray any Doğupark. Ny dingana voalohany amin'ny overpass miaraka amin'ny escalator, izay hanamora ny fiainan'ny olom-pirenena zokiolona sy kilemaina, dia ho vita amin'ny fotoana fohy. Samsun Metropolitan [More ...]
Voafetra ao amin'ny Kayseri ny curfew
Kayseri Metropolitan Munisipaly dia manohy ny fanavaozana azy eny amin'ny arabe izay najanona noho ny tsy fandehanana amin'ny ora. Raha ny asa sasany amin'ny fotodrafitrasa KASKİ dia atao amin'ny arabe sasany ao afovoan-tanàna, ny ekipa Science Work dia manatanteraka asa asphalting ihany koa. Metropolitan Munisipaly [More ...]
Ny tanànan'i Hospital Sancaktepe City dia hitsiry taona 2022
Ny ben'ny tanànan'i Istanbul Metropolitan, Ekrem İmamoğlu, dia nanao fizahana amina toeram-panorenana roa any amin'ny lafiny anatolianina sy eoropeana, izay manohy miasa amin'ny làlana mankany. Ny fijanonan'i Imamoğlu voalohany dia ny fanombohana ny fitantanana teo aloha tamin'ny taona 2017 ary hampijanonana izany amin'ny taona ihany. [More ...]
Ny isan'ny mpampihorohoro izay tsy miandany tamin'ny 1 Janoary dia 1359
Eo ambany fitarihan'ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena Hulusi Akar, ny Lehiben'ny mpiasa General Gen. Yaşar Güler, kaomandin'ny tafika tany Gen. [More ...]
Karazan'aretina 7 hafa sy fanafody 4 hafa ampiasaina amin'ny fitsaboana MS
Ny minisitry ny fianakaviana sy ny asa ary ny asa ara-tsosialy Zehra Zümrüt Selçuk dia nanambara fa fanafody 7 hafa no nampidirina tao anaty lisitr ny famerenana vola, 4 ho an'ny homamiadana ary 11 ho fitsaboana an'i MS. “Namerina tamin'ny SUT vaovao [More ...]
Momba ny lalamby fenitra mahazatra an'i Bursa Bilecik
Burra-Bilecik fiaran-dalamby dia lalamby lalamby avo làlana izay hiarahana amin'ny zotra mitondra haingam-pandeha ambony amin'ny Ankara-Istanbul rehefa vita.Mamboarina eo anelanelan'ny Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ao anatin'ny faritry ny tsipika. Bursa-Yenişehir amin'ilay tetikasa 105 km izay hifandray amin'ny zotra Ankara-Istanbul avy any Bilecik [More ...]
Fanapahan-kevitra Flash Channel Istanbul Avy amin'ny Fitsarana!
Noho ny fangatahana fanafoanana ny fanapahan-kevitra "mahomby amin'ny tontolo iainana" (EIA) momba ny tontolo iainana "tamin'ny 17 Janoary 2020 ho an'ny tetikasa Kanal Istanbul hanoherana ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fanavakavahana ny monisipaly Istanbul Metropolitan [More ...]
Ny fanafoanana ny sidina noho ny valanaretina Covid-19 dia nivadika seranam-piaramanidina ho tanànan'ny matoatoa. Tamin'ny volana aprily, ny fifamoivoizana mpandeha dia nahatratra 99 isan-jato raha oharina tamin'ny volana teo aloha, raha toa ka olona 84 ihany no afaka nanidina. 65 amin'izy ireo [More ...]
Minisitry ny governemanta Karaismailoğlu raha nisy mpiasa niaraka tamin'ny mpiasa tao amin'ny tranobe Tunnel T26
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu dia nanamboatra tranokala niaraka tamin'ireo mpiasa niasa tao amin'ny tranokalan'ny Tnel Ankara-Istanbul High Speed ​​Train T26. Karaismailoğlu, izay niaraka niaraka tamin'ireo mpiasa tao amin'ny toeram-panorenana any amin'ny distrikan'i Bozüyük any Bilecik, amin'ity taona ity dia karazana vaovao vaovao ity. [More ...]
Ankara dia nahavita ny Tunnel Istanbul T14 izay haharitra 26 minitra
Karaismailoğlu, izay nanao fanadihadiana momba ny fananganana ny Tunnel T26 ao amin'ny faritr'i Demirköy, izay eo an-dalam-pamolavolana ao anatin'ny faritry ny Tetikasa Haingamoriana High Speed, Ankara-Istanbul, any amin'ny distrikan'i Bozüyük, dia nandray ny fepetra rehetra nifanaraka tamin'ny tolo-kevitry ny Ministeran'ny Fahasalamana momba ny karazana coronavirus (Kovid-19). [More ...]
Taorian'ny nanompoany 83 taona, dia tapitra ny asa eny amin'ny lalamby Samsun-Sivas, izay nakatona ho an'ny fitaterana mba ho voamboary ny 29 septambra 2015. Nohavaozina ny fotodrafitrasa rehetra sy ny fanamboarana ny tsipika 431 kilometatra ary i Eoropa [More ...]
Mba hahatonga ny fitaterana ho tsara sy tsy hanelingelina azy, ny Kocaeli Metropolitan Munisipaly, izay manohy ny asany ao amin'ny areti-mifindra coronavirus, misy vatokely miangona eo am-bavahady manoloana ny Orduevi ao amin'ny Tunnel Izmit Büyük Seka tamin'ny herinandro teo. [More ...]
Mametraka ny fiainana ao Izmir ny fampiharana fampiatoana invoice
Izmir Metropolitan Munisipal no nanatanteraka ny fampiharana "invoice hangady", izay nanomboka tany Istanbul, ao İzmir noho ny fangatahan'ny vahoaka. Ny volan'ny fianakaviana izay manana olana ara-toekarena amin'ity valan'aretina manerantany ity dia hotsarain'ny firaisankina İzmir. Izmir Metropolitan kaominina, [More ...]
Fambolena sy Ala sy ny Minisitry ny Fiarovana sy ny natiora National Parks (DCM) Tale Jeneraly tanindrazany Turkey kapreola (Dama Mahaleo) noho ny fiarovana, manohy famokarana sy famotsorana fampianarana. Amin'izany toe-javatra izany, ny natiora ao Antalya Manavgat [More ...]
Tao anatin'ny sehatry ny tetik'asa vaovao an'ny Orinasa Momba ny Milina sy Chemical Chemical (MKEK) dia niditra tao amin'ny orinasa Gazi Fişek ny orinasa vaovao. Hanala tanteraka ny fiankinan-dàlana any ivelany izany, tanteraka [More ...]
Tale jeneralin'ny Talen'ny Fitantanan-draharahan'ny seranam-piaramanidina Air - Trainee Air Traffic Controller fidirana an-tsoratra momba ny andrim-panjakana sy ny toerana tokony ho raisina amin'ny fanadinana: Dirte générale générale d'Étudres. [More ...]
Na ho voaloa mialoha ny fety mialoha ny fialan-tsasatra mialoha ny fialan-tsasatra dia efa ao anatin'ny fandaharam-pandrenesan'ny olona misotro ronono an-tapitrisa. Zehra Zümrüt Selçuk, minisitry ny fianakaviana, mpiasa ary asa sosialy, miaraka amin'ny fandoavana ny fisotroan-dronono [More ...]
Fampidirana ny Tenin'ny famantarana Tiorka ho an'ny Mpianatra amin'ny Herinandron'ny herinandro
Ny minisitry ny fianakaviana, ny asa ary ny asa sosialy Zehra Zümrüt Selçuk dia nanambara fa hiasa ao anatin'ny ambaratonga fandaharana EBA ho an'ny 10-16 herinandro tsy misy kilema izy ireo. Minisitra Selçuk; “Nambaran'ny filohan'ny Filoha Atoa Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Tsy mandoa hetra arak'antoka ny vola any! Tsy misy taxi no alaina tsy saron-tava!
Ny minisiteran'ny Atitany dia nandefa fepetra ho an'ny fahadiovana ara-barotra ara-barotra amin'ny alàlan'ny 81. Raha ny voalazan'ilay faribolana, dia hisy taxi-voly isan-kerinandro, tsy ho afaka mahazo taxi ny mpanjifa raha tsy saron-tava. Ny mpamily fiarakaretsaka dia miasa araka ny lalàn'ny fahadiovana manokana [More ...]
Fiaran-dalamby hiainga ny olona amin'ny famakivakiana haavo amin'ny Frankfurt 1 maty, 2 naratra
Lozam-pifamoivoizana nahatsiravina nitranga tao amin'ny distrikan'i Nied ao Frankfurt, Allemaina, tokony ho tamin'ny 20.00 ora hariva. Raha ny fitantaran'ireo nanatri-maso dia nisy fiaramanidina haingana tonga tampoka raha mbola misokatra ny sakana. Famaritana taorian'ny loza [More ...]